Hiran State - News: Golaha Horumarinta Midnimada Xawaadle Ee UK Oo
Golaha Horumarinta Midnimada Xawaadle Ee UK Oo
GOLAHA HORUMARINTA MIDNIMADA XAWAADLE EE UK (UK)
UJEEDDO: BAAQ TAAGEERO IYO TALO SOO JEEDIN
Dhamaan xubnaha Golaha Horumarinta Midnimada Xawaadle ee UK, markii ay iskugu yimaadeenshirkoodii caadiga ahaa ee la qabto wiigiiba mar waxay si qoto dheer uga doodeen isla markaanau darseen xaaladda cusub ee Gobolka Hiiraan hadda ku suganyahay iyo marxaladihii adkaa ee uusoo maray Gobolku mudadii ay dalka ka jireen dagaalada sokeeye, iyo sababaha keenay inuu dib u dhac weyn ee dhinac walbaba leh ku yimaado Gobolka Hiiraan hanoqoto dhinaca Siyaasadda,Abniga, dhaqaalaha, iyo dhinacyada horumarinta arrimaha Bulshada.
Golaha HMX ee UK isaga oo aad u tixgelinaayo qodobada sare ku xusan iyo kuwa kale oo badan eedhab-ahaan ka jira Gobolka Hiiraan, isla-markaana arkay Magacaabista Gudoomiyaha cusub eemaamulka Gobolka Hiiraan ayuu go’aansaday arrimaha hoos ku xusan:-
1: Golaha HMX ee UK, wuxuu Taageero Buuxda u soo jeedinayaa Maamulka Cusub ee GobolkaHiiraan, wuxuuna Ilaah Subxaana qaadirka ah uga baryayaa inuu xilkaas adage ee loo soomagacaabay la garab galo.
2: Goluhu wuxuu maamulka cusub ka rajeynayaa uguna baaqayaa Inuu:-
2.1: la yimaado waxqabad dhab ah ee uu maamulku Gobolka ku kasban karo kalsoonida shacabkakala duwan ee ku nool dhamaan Gobolka Hiiraan.
2.2: Maamulka cusub ugu shaqeeyo reer Hiiraan mar-walba Cadaalad iyo sinaan, isla markaanasugo amaanka naftooda, maalkooda iyo hantidooda ma-guurtada ah intaba.
2.3: Si deg-deg ah maamulka cusub ugu howlgalo sidii loo dhigi lahaa gogol nabadeed Gobolkahiiraan isaga la kaashanaaya dhamaan Ugaasyada iyo Wabarrada Gobolka Hiiraan, taas oo ay kasoo wada qeyb galaan dhamaan qowmiyadaha kala duwan ee ku abtirsada Hiiraan iyaga oo ayhogaaminayaan madax dhaqameedyada, Aqoonyahannada, waxgaradkooda, iyosiyaasiintoodaba intaba.
2.4: Diyaariyo sida ugu dhaqsiyaha badan Barnaamij Howleed cad mid dhow iyo mid fogba eewaadax ah ee ku saleysan daryeelka iyo wax-kaqabashada dhabta ah ee baahida Bulshadaraagtay ee ka jirta guud ahaan Gobolka Hiiraan iyo sidii looga bixi lahaa.
2.5: Soo dhaweeyo amaankoodana sugo dadka u dhashay Gobolka Hiiraan ee dib ugu soolaabanaayo Gobolka iyaga oo u imaanayo siyaabo kala duwan oo dan, nabad, iyo horumar u ahdantooda iyo tan Gobolka Hiiraan.
2.6: Sidoo kale in si wacan oo maamuus sare leh iyadana loo soo dhaweeyo amaankoodana lasugo dhamaan Hay’adaha Caalamiga ah ee ka shaqeeya Samafalka iyo Horumarinta ee doonayoin ay ka howl-galaan Gobolka Hiiraan.
3. Golahu wuxuu ka codsanayaa dhamaan dadka ama qowmiyadaha dega Gobolka Hiiraan in aytaageero buuxda u fidiyaan maamulkan cusub, isla markaana si hagar la,aan ah ula shaqeeyaansidii uu u gudan lahaa waajibka loo soo idmay.
4. Goluhu wuxuu si gaar ah uga codsanayaa dhamaan Ugaasyada, wabarrada , iyo Salaadiintabeelaha kala duwan ee dega Gobolka Hiiraan in ay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan nabad kuwada noolaanshaha dadka walaalaha ah ee dega Gobolka Hiiraan.
5. Goluhu wuxuu si gaar ah ugu soo jeedinayaa talo nasteexo leh dhallinyarada ku nool gobolkaHiiraan oo ay horey u qaldeen Al-Shabaab in ay ka waantoobaan kana toobad keenaanqaladaadkii ay horey u galeen in aysan dib-danbe ugu noqon, haddana wax-wanaagsanna laqabsadaan kana qeyb-qaataan amaanka iyo horumarinta howllaha maamulka cusub ee Gobolka.
6. Ugu danbeentii GHMX wuxuu u soo jeedinayaa dhamaan Bulshada qabiilada kala duwan ee kunool Gobolka Hiiraan in ay midoobaan kuna wada noolaan walaaltinimo, isjaceel iyo Is-qaddarinmar walba.
7. Maamulka Gobolku sii wado halganka xoreynta dhamaan degmoooyinka Gobalka Hiiraan eeweli ku harsan kuna jira gacanta gumeysiga Al-shabaab illaa iyo inta uu dhamaan Degmooyinkaiyo tuulooyinka Gobolka Hiiraan laga sifeeyo Haraadiga gumeysiga Al-shabaab.
8. Maamulka Gobolku tixgeliyo Xoogagga kale ee u dhashay Gobalka kalana qeyb-qaadanaayomar-walba halganka xoreynta Gobolka Hiiraan, isla markaana la raadiyo qaab ama Xal-waara oowanaagsan oo lagu wada shaqeyn karo mar-walba, abuurayana Isku-tanasul, Kalsooni, Is-fahamiyo Is-aaminid waarta kuna dhisan Is-maqal, Is-qaddarin, iyo kala-danbeyn waarta eeWalaaltinimo oo dhinac-walbaba leh.
GUDD. GHMX EE UK
· admin on April 01 2012 20:10:46 · 0 Comments · 1881 Reads ·
14,568,443 unique visits